Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Värmlands län / Kil
Degmada waxaa ka ag dhow waxyaabaha qofka uu u baahan yahay badankood. Waxaad taas ka dareemeysaa nooljaaliyadeedka ka jira degmada oo eey ka mid yihiin gofka, ciyaaraha barafka, garoomo isboortis oo gudaha ah, garoomo baraf ah, garoomo teenis, garoomo fardaha lagu wado, garoomo isboortiska kala duwan lagu qabto iyo garoomada kubadda cagta.
407 kiilomitir oo laba jibaaran
Karlstad 23 kiilomitir
Örebro 130 kiilomitir
Oslo 216 kiilomitir
Degmadeena waxaad ka heleysaa nuucyada kala duwan ee guryaha aad rabtid inaad degtid sida Fillooyinka, guryaha laga gado dabaqyada dhaadheerka ama guryaha caadiga loo kireysto. Waxaan xoogga saareeynaa hadda xaafadda cusub ee Lövenstrand oo u dhow balliga Fryken.
Liistada guri-kireeyayaasha iyo guri-iibiyayaasha.
Luqadaha ugu waaweyn ee degmada waa carabiga, daariga, iiraaniga iyo af-soomaaliga laakiin waxaa kaloo jira dad aan saas u badneyn oo luqado kale ku hadla.
Jaaliyadaheena oo lagu qiyaaso 1000 jaaliyadood waxaa xubno ka ah ku qiyaastii 13 000 oo xubnood. Boggeena internetka waxaad ka akhrin kartaa warbixin dheeraada oo ku saabsan jaaliyadaha iyo liiska diiwaan galinta jaaliyadaha.
Xaafadaha bartamaha Kil waxaa ku yaal maktabad, dukaamo, xafiiska shaqada iyo dukaamo-gacan labaad. Waxeey aad ugu dhowdahay magaalada Karlstad (20 km) halkaasoo aad ka soo adeegan kartid dukaamada waaweyn sida IKEA.
Waxaan heysanaa 11 dugsiyada xanaanada carruurta ah, labo baraayfat ah, kuwo ah guryaha xanaanada carruurta iyo xanaano u faran waalidiinta carruurtooda guryaha la joogo. Xilliga Gu'a ee sanadka 2015 waxaa dhismahiisa dhameystirmi doona iskoolka xanaanada carruurta ee Mons Backe. Waxaa degmada Kil usoo guuro qoysaska carruurta leh.
Sannerudsskolan, oo ah dugsigeena hoosedhexe, waa la dhameystiray waxaana la filaa inuu noqdo iskoolka ugu fiican Iswiidhan oo dhan. bartamaha Kil waxaa ku yaal afar dugsiyada hoosedhexe ah, iskoollada degmada bannaankeeda ka dhisan waxaa loogu tala galay tuulooyinka Fagerås, Högboda iyo Tolita. Ma heeysanno dugsi sare. Ardayda badankood waxeey dugsi sare u aadaan magaalada Karlstad.
In loo safro jaamacadda Karlstad waxeey qaadanee 20 daqiiqo. Hadaad waxbarashadaada dhigatid adigoo gurigaada jooga (distans) waxaad isticmaali kartaa maktabada qeybteeda Lärstudion i Kils bibliotek adigoo dhiibaya lacag aan badneyn. Iskoolka waxbarashada dadka waaweyn ee degmada Kil waxaa laguugu baraa luqadda iswiidhishka ah ee loogu tala galay dadka qaxootiga ah (sfi). Machadka Folkhögskolan ee ku yaal Kristinehamn waxaa laguugu baraa sida bulshada iyo dadka iswiidhishka ah sida eey u shaqeeyaan waxaana casharada lagu bixinaa luqadaada hooyo.
Waxaad baraneysaa macluumaad ku saabsan degmada Kil adigoo fiirsanaya filimaan kala duwan, sida filinka ka hadlaayo marka eey dadka wadanka ku cusub baranayaan isboortiska lagu sameeyo barafka eek goobta Frykstabacken. Filimaantaas boggeena internetka ayaad ka heleysaa.
Jaamacada Karlstad Waxbarashada dadka waaweyn
Waxaa degmadeena ku yaal rug caafimaad. Waxaa ku yaal Familjecentralen, oo ah good eey ku kulmaan dadka waalidiin noqon raba iyo waalidiinta carruurta yaryar heeysata. Degmada Kil waxaa ku yaal labo dhakhaatiirta ilkaha ah. Isbitaalka weyn ee ugu dhow waxuu ku yaal Karlstad.
Daryeelka caafimaadka, daryeelka caafimaadka iyo daryeelka bukaanka ee degmada
Hel macluumaadka xiriirka iyo wakhtiyada furitaanka ee rugaha caafimaadka oo ku qoran Hagida daryeelka 1177 Vårdguiden. Rugta qoysaska Akhri dheeraad ku saabsan dhakhtarka ilkaha.
Degmada Kil waxeey turjubaanno kasoo ijaartaan xafiiska turjubaanka ee Karlstad. Waan isticmaali karnaa turjubaanno marka aan qof kula kulmeenno xafiisyada dowladda.
Degmada Kil meesha meesha eey waa meel eey fududahay in laga safro. Tareenka, baska iyo baabuurka kulligood waxeey 15 daqiiqo gudahood kugu geynayaan Karlstad saddax saacna waxeey kugu geynayaan Stockholm, Göteborg iyo Oslo. Garoonka diyaadda Karlstad, 8 km ayuu u jiraa, waxuuna si fudud idunkugu xiraa aduunka intiisa kale.
Warbixin dheeraada ka akhriso bogga internetka ee dhinaca gadiidyada safarka.
Kil waxaa ka dhisan shirkado yaryar iyo qaar xoogaa waweyn oo ka shaqeeya dhinaca garaashyada. Dadka shirkadaha ku leh degmada Kil waxeey talooyin iyo fikrado ku saabsan ganacsigooda kala hadli karaan guddiga shirkadlayaasha ee degmada. Guddigaas waxaa xubno ka ah 10 qofood oo kala soo jeeda baranjiyo kala duwan. Waxaad Warbixin dheeraada oo ku saabsan ganacsiga ka heleysaa boggeenna internetka.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Kil